Huawei dia nanambara izay telefaona hanana Android Q amin'ny fomba ofisialy | Androidsis
Huawei dia manamafy fa ny telefaona 17 dia hanana Android Q
Huawei dia mijaly noho ny fanakanana amerikana, izay mihevitra a fihenam-bidy lehibe amin'ny varotrao sy ny fidiram-bolanao. Ankoatry ny fiheverana fa ny marika sinoa dia tsy ho afaka hanavao ny findainy amin'ny Android. Na eo aza izany dia tsy ela akory izay dia nisy vaovao nipoitra izay nahagaga ny rehetra. Hatramin'ny lisitry ny telefaona marika Sinoa izay hanana ny fanavaozana ny Android Q. izy ireo Zavatra iray nampiakatra ny karazana vinavina rehetra.
Na dia noraisina ho azy aza dia tsaho, izay voamarina ankehitriny. Satria i Huawei mihitsy no manambara lisitr'ireo findainao 17 izay hanana ny fanavaozana ny Android Q. Efa ilay Fizarana anglisy ny marika sinoa izay nanamafy an'ity vaovao ity sahady.
Ka antenaina izany Lisitry ny telefaona Huawei izay hanana Android Q amin'ny fotoana iray. Ny fanontaniana dia hoe raha tena afaka manavao izy ireo na raha misy fifanarahana eo, izay mbola tsy fantatsika ny zava-drehetra. Na ahoana na ahoana, ny marika sinoa dia mamela antsika manana anarana 17 ao amin'ny katalaoginy, izay ireto manaraka ireto:
DESIGN PORSCHE Mate 20 RS
DESIGN PORSCHE Mate 10
Afaka hitantsika fa maro amin'ireo telefaona ao amin'ity lisitra ity ampifanaraho amin'ireo hitantsika tao amin'ity famoahana ity roa herinandro lasa izay. Ny avo lenta an'ny marika sinoa, maodely sasany antonony antonony ary maodely roa avy eo antenatenany. Somary amin'ny zava-drehetra amin'ity lisitra Huawei ity.
Tsy maintsy miandry isika jereo raha tena manana fidirana amin'ity fanavaozana ity amin'ny Android Q izy ireo na tsia. Tsy isalasalana fa mpampiasa maro no manantena fa izany no izy, mba hahafahan'izy ireo mampiasa ny findainy Huawei ara-dalàna amin'ny fotoana rehetra. Ankoatry ny fahafahanao mankafy ny vaovao rehetra fa ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa dia hamela antsika amin'ity lafiny ity. Ahoana ny hevitrao momba izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei dia manamafy fa ny telefaona 17 dia hanana Android Q
Ny LG W10 dia miseho amin'ny Android Enterprise ary misimisy kokoa ny famaritana azy